Uhlobo lwentshebe ngokobuso bakho, kufanele ugunde kanjani? | Amadoda aSitayela
UPaco Maria Garcia | | Kugundiwe, Indlela yokuphila
Sisanda kuthola ukuzalwa kabusha kwentshebe njengokugqoka ebusweni. Cishe wonke umuntu ugqoka izinhlobo ezahlukahlukene, imbuzi, izinhlanga…, Njll. Okufanele kwaziwe ukuthi hlobo luni lwentshebe olusifanela kahle nohlobo lwethu lobuso, hhayi zonke ezithuthukisa isithombe sethu.
Ngentshebe singalungisa izinto eziningi, kusuka oval yobuso bethu, ukufeza ubuso ngokuvumelana okukhulu. Kufanele nje unqume ukwakheka kokuwa kwakho bese ukhetha ukusikwa kwentshebe okukufanele kakhulu.
1 Uhlobo luni lwentshebe olulungele ubuso bakho?
2 Ubuso obunwetshiwe
3 Ubuso obuyisikwele
4 Ubuso obuyindilinga
5 Ubuso be-oval
8 Uma unesilevu esiphindwe kabili ...
Uhlobo luni lwentshebe olulungele ubuso bakho?
Ukusikwa Kwezinwele zeBraun
UPhilips MG3730 / 15 ...
Kukhona eziningi izizathu zokugqoka intshebe. Kungenxa yokuthi kuphakathi kwamathrendi wakamuva, ngoba silandela isibonelo somuntu odumile, ngoba uyasithanda, njll. Kepha iyiphi intshebe esifanela kahle ngokususelwa ohlotsheni lobuso esinabo?
Intshebe kubhekwe njengesinye sezesekeli zobuhle kakhulu zamadoda. Izintshebe zazo zonke izinhlobo ziyabonakala. Ngisho nalolu hlobo lwentshebe luguqule umkhakha wemikhiqizo yokunakekelwa: amabhulashi, ama-wax anika ukwakheka okufunayo, ama-lotion wokunisela intshebe, amabhulashi ukuze enze umphumela ocwebezelayo, njll.
Ubuso obude bungu- ezibucayi kakhulu ukutshala intshebe. Kuyadingeka ukugwema ukuthi ubuso bunomphumela wokwandiswa okungaphezulu namanje. Uhlobo lwentshebe okufanele lusetshenziswe kulezi zimo yilolo lwe- intshebe emfushane enezinsipho eziwugqinsi. Ngale ndlela, ubuso buzovela buvuleke kancane futhi bunokumila okuthe xaxa.
Ukhiye ungaphakathi yakha uhlobo lwenhlendla ebusweni, lokho kuthambisa umphumela wobuso obuhlangene kancane.
Uma une ubuso obude ukhetha ukusika kahle kakhulu nokuthi ungalokothi ubone ngezansi komhlathi, lokhu kuzokwenza ukuthi ubuso bakho bube bude ngokwengeziwe. Intshebe yakho kufanele ibe mfushane endaweni yesilevu futhi ibanzi ezindaweni ezisemaceleni ukuze yakhe uhhafu wenyanga owenza ukuthi ubuso bungaveli kangako.
Lokhu kunjalo ngabalingisi abanjengoGeorge Clooney noma uBrad Pitt okuthi, ngalolu hlobo lobuso, baqondise izintshebe zabo ngale ndlela.
Ubuso besikwele buchazwa ngu esiphongweni esibanzi, izihlathi eziphakeme, kanye nesilevu esinganamathele kakhulu. Imbuzi ihlale iyindlela engcono kunazo zonke ukuze ubuso buvuleke kakhulu futhi kube nomphumela wesitayela.
Kufanele kanjani kube imbuzi? Nge izinwele ezengeziwe endaweni yesilevu kanti kancane ezinhlangothinis. Ngisho nezinhlangothi zingagundwa ngokuphelele.
Lezi zinqa zigcinwa kalulaUsebenzisa umshini kagesi olula, awudingi ngisho nokugunda ukuze ubukeke kahle.
El ubuso obuyisikwele ingenye yezinto ezivame kakhulu. Imvamisa ihlotshaniswa nebunzi elibanzi, ama-cheekbones abiziwe kanye nesilevu esingekude kakhulu kepha esichazwe kahle. Intshebe yezimbuzi ilulungele lolu hlobo lobuso, yelula isilevu ukuze le ndawo ibe yindawo ebhekwe kakhulu. Ungakhohlwa ukusika intshebe ezinhlangothini ezinesimo esiyindilinga ukuze unciphise umugqa wobuso.
Un Ubuso obuzungezayo Kubonakala ngokuba namathanga amancane kakhulu nezihlathi eziqhakazile. Kunconywa ukuthi ugqoke intshebe engaphezulu efihla ukuzungeza kobuso, futhi iyenze ibe yinde. Sika ekuphakameni ezihlathini.
I-Los izihlathi ezidumbile nezihlathi kanye nesilevu esincane khiqiza umuzwa wokuthi ubuso babufushane. Kubalulekile, kulolu hlobo lobuso, ukuthi intshebe i-angular, ichaza umhlathi kancane futhi idale umuzwa wokunwebeka kobuso. Uma kukhona futhi isilevu esiphindwe kabili, into ephumelela kakhulu ukuthi izinwele zikhula ngaphansi kwesilevu, lapho kubheke khona entanyeni.
Uma ubuso buwuhlobo lwe-oval, isici esiyinhloko ukuthi izici ziyindilinga. Lobu buso yibo obugcina kahle kakhulu ubukhulu phakathi kwezihlathi, isilevu nebunzi. Kubhekwa njengobuso obuhle.
Kule ndlela yobuso, intshebe ihlala ivame ukulingana kahle. Cishe yimbuzi ehlangana kahle kakhulu, futhi nentshebe engamakiwe kakhulu ebusweni bonke.
Kungenzeka lokho umuzwa wokumisa ubuso nxazonke Kwakufihlwe ingxenye yentshebe.
Lobu buso, nge i-shades ikhumbuza unxantathu, zibonakala ngezimpawu ezimakiwe kanye nesilevu esivulekile kakhulu.
Kulolu hlobo lobuso, uhlobo lwentshebe olungangena kahle yonke intshebe, ezosiza ukufihla umuzwa wobulukhuni kancane ezimaka lobuso.
Intshebe ingakhula ibe yinde emaceleni futhi ibe mfushane kancane endaweni yesilevu, okuphambene nokwenzeka kwizibonelo zangaphambilini.
Kulezi zimo kunjalo Kunconywa ukuthi intshebe inakekelwe kahle kakhulu, ukuze imakwe ebusweni futhi ingakhuli ngaphezu kwesilevu. Isitayela "sezintshebe zezinsuku eziningi" singahle silingane kahle.
Kwesinye isikhathi, ubuso bedayimane budidekile nonxantathu nesikwele. Empeleni, uma sibheka kahle, kwehluka ngokuba banzi esihlathini kunokuba phezulu ekhanda noma esilevini.
Intshebe ehamba phambili yalolu hlobo lobuso imvamisa imbuzi enomthelela wokwakha izindebe. Kukhona futhi inketho yokugqoka amadevu bese kuba nentshebe, ngaphansi kwendebe engezansi. Lokhu kubukeka kwenziwe kwathandwa nguJohny Deep.
Uma unesilevu esiphindwe kabili ...
Kulabo abanesilevu esiphindwe kabili okuhle kakhulu yintshebe egcwele, ezocwenga ubuso ngokujwayelekile futhi imboze isilevu esiphindwe kabili uqobo. Yenza intshebe ibe mncane impela, iphele ngqo kulayini wesilevu ngaphandle kokuya entanyeni.
Kepha kubalulekile, Uma ungathandi ukugqoka intshebe, hlola ukubhebhetheka kwakho. Uma ubuso bakho buzacile, khetha ithempeli elifushane, uma linonile, shiya ithempeli isikhathi eside ukudweba umugqa womhlathi.
Lezi zeluleko zingasiza ukushintsha ukubukeka.
Manje kufanele ukhethe wena, intshebe yebo noma cha?
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Kugundiwe » Uhlobo lwentshebe ngokobuso bakho
iziphi izintshebe ezimbi
URicardo "DjGomita" García Paredes kusho
Nginentshebe engalingani, intshebe yami ayivali U. U. Futhi ngingajabula kakhulu ngeFrench Fork ndevu> w
Hhayi-ke, sengizame cishe bonke abasohlwini ngaphandle kwe-hulihee xD, ngeshwa ngithola intshebe eningi nezinwele ezincane ekhanda lami.
UHugh Jackgman noJustin Timberlake banobuso obuyindilinga ????
I-XD XD XD XD